Izindaba - Imihlahlandlela eyisisekelo yokuhlanza i-JR-D120 yokugaya inyama eqandisiwe kahle
Imihlahlandlela eyisisekelo yokuhlanza i-JR-D120 yokugaya inyama eqandisiwe kahle
I-Jr-d120 iyisetshenziswa esithandwayo, kepha noma nini lapho uphatha inyama eluhlaza, ukuhlanza kuyadingeka ukugwema amabhaktheriya namagciwane kusuka ezinsaleleni. Kodwa-ke, ukuhlanza i-grinder yakho akufani nokuhlanza abanye abapheki. Ngemuva kwalokho, ukugcinwa okufanele kwezakhi zayo kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi inakekelwa kahle (ngakho-ke mancane amathuba okuthi kudale ukudideka okusetshenziswayo) Ukulandela amanye amathiphu angeziwe lapho usebenzisa kuzosiza nokuqinisekisa ukuhlanzwa okulula.
Geza izandla zakho zokugaya inyama efriziwe
1. Hlanza ngokushesha ngemuva kokusetshenziswa.
Njengoba inyama idlula kwi-grinder yakho, kulindeleke ukuthi ishiye uwoyela no-grease (nenyama ethile ehlakazekile) Uma isikhathi sivuma, zizoma futhi zikhumba, ngakho-ke ungalindi isikhathi eside ngaphambi kokuzihlanza. Yiphathe ngesikhathi ngemuva kokusetshenziswa ngakunye ukwenza impilo ibe lula.
2. Faka isinkwa kugaya.
Thatha izingcezu ezimbili noma ezintathu zesinkwa ngaphambi kokuqaqa umshini. Bondle nge-grinder njengenyama yakho. Yisebenzise ukumunca uwoyela namafutha enyameni bese ukhipha noma imuphi udoti osele emshinini.
3. Susa iShijiazhuang grinder yenyama efriziwe.
Okokuqala, uma umshini ugesi, wukhiphe. Bese uyihlukanisa izingxenye eziningana. Lokhu kungahluka ngohlobo nangemodeli, kepha imvamisa i-grinder yenyama ifaka:
I-Pusher, ipayipi lokuphakelayo kanye ne-hopper (imvamisa ucezu lwenyama lufakwa kulo mshini ngalo).
Isikulufa (iphoqa inyama ngezingxenye zangaphakathi zomshini).
Ipuleti noma isikhunta (insimbi ebunjiwe okuvela kuyo inyama).
Ikhava le-Blade ne-plate.
4. Cwilisa izingxenye.
Gcwalisa usinki noma ibhakede ngamanzi afudumele bese ufaka umuthi wokuwasha izitsha. Uma ugcwele, faka izingxenye ezisusiwe ngaphakathi. Bayeke bahlale cishe ikota yehora futhi baphumule noma yimaphi amafutha, inyama noma inyama esele.
Uma i-grinder yakho ingugesi, ungafaki noma yiziphi izingxenye zikagesi. Esikhundleni salokho, sebenzisa lesi sikhathi ukusula ingaphandle lesisekelo ngendwangu emanzi bese womisa ngendwangu entsha.
5. Khuhla izingxenye.
Hlanza ngezikulufo, izembozo kanye nama-blade ngesiponji. Qaphela lapho uphatha i-blade ngoba icijile futhi kulula ukukusika uma ungayiphathi kahle. Shintshela kubhulashi lamabhodlela ukuhlanza ngaphakathi kwepayipi lokuphakelayo, i-hopper nembobo yepuleti. Uma usuqedile, hlanza ingxenye ngayinye ngamanzi ahlanzekile.
Ungasheshi ngenqubo. Ufuna ukususa yonke imikhondo ukuze ungabi yindawo yokuzalanisa amabhaktheriya. Ngakho-ke uma ucabanga ukuthi ukhuhle ngokwanele, khuhla okwengeziwe.
6. Yomisa izingxenye.
Okokuqala, zomise ngethawula elomile ukuze ususe umswakama omningi. Bese usomisa ithawula elisha noma i-rack rack. Linda ukuthi izingqungulu zome ngaphambi kokuzibeka endaweni ukugwema ukugqwala ne-oxidation.
Isikhathi Iposi: May-06-2021